Arunima Lamsal - Actress and model
Topic: Arunima Lamsal - Actress and model
Author Topic: Arunima Lamsal - Actress and model (Read 24172 times)
« on: August 23, 2009, 06:52:17 AM »
By - स्मृति ढुंगाना - from nagariknews
नेपाली महिलाहरुको महान् चाड हरितालिका तीजको अवसरमा नायिका अरुणिमा लम्साललाई तीजको विशेष पहिरनमा प्रस्तुत गरेका छौं । यसका लागि रातो, पहेँलो र फिका निलो सादा गुलाबी सुन्तला र कलेजी रंगको साडी छनौट गरिएको छ ।
तीजको ब्रत कसका लागि ?
म विवाहित हुँ, त्यसैले पतिको दीर्घायुका लागि ।
तीज हिन्दु नारीको मात्र चाड हो ?
आजभोलि अरु धर्म मान्नेहरु पनि तीजमा ब्रत बसेर नाँचगान गरेर रमाइलो गर्छन् । त्यसैले हिन्दु नारीको मात्र चाड भन्न मिल्दैन ।
यसपालिको तीजमा केही विशेष गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसपालि घरैमा बसेर नाचगान गर्ने विचार छ । त्यसैले तीजकै दिन सुटिङ नपरिदियोस् भन्ने कामना गरिरहेकी छु । म निराहार ब्रत बस्न सक्दिनँ । स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुपर् यो नि ।
त्यसो भए पानी पनि नपिएर ब्रत बस्ने परम्पराको विरोध गर्नु हुन्छ ?
यसलाई विरोध भन्न मिल्दैन होला । शरिरले साथ दिन्छ भने केही समस्या भएन । तर कतिपय महिला आफ्नो स्वास्थ्यको ख्यालै नराखी ब्रत बस्छन् । पछि अस्पताल दौडाउनुपर्छ । चाडपर्व मान्ने नाममा आफैं थला पर्नु त भएन नि ।
तीजको ब्रत बस्न थालेको कति वर्ष भयो ?
विवाहअघि पनि बस्थेँ । त्यतिखेर करलाग्दी थिएन । विवाहपछि बाध्यता नै भयो । निरन्तर बस्न थालेको ४ वर्ष भयो ।
विवाहअघि र पछिको ब्रतमा के/कस्तो भिन्नता हुँदो रहेछ ?
विवाहअघि आमा दिदी भाउजूहरु ब्रत बसेको देखेर रहर लाग्थ्यो । राम्रो र असल श्रीमान पाइयोस् भनेर पनि बसियो । विवाहपछि श्रीमानको दीर्घायुका लागि बसिरहेकी छु ।
यो दिन छुटाउँदै नछुटाउने कुरा केही छ ?
घाँटीमा रातो र पहेँलो पोते छड्के तिलहरी र सिन्दुर ।
कसैलाई तीजमा तयार पार्नुपरे कसरी तयार पार्नुहुन्छ ?
अविवाहित हुन् भने हल्का मेकअप प्रयोग गर्छु । त्यसपछि कुर्ता सुरुवालमा तयार गर्छु । गहनामा सुनभन्दा हिराको सानो सिक्री लगाउनु राम्रो । विवाहितहरुका लागि रातो साडी चाहिन्छ । मेकअपमा हल्का फाउन्डेसन अनि गहनामा चुरा पोते र तिलहरी लगाउनु बेस । कपालमा रातो धागो बाँध्दा निकै खुल्छ ।
आफैं तयार हुनुपरे ?
तीजको अघिल्लो दिनै स्टिम बाथ लिन्छु । यसले फ्रेस बनाउँछ । छाला उज्यालो पार्छ । तीजको दिन बिहान फेसवास गर्छु । त्यसपछि केही बेर छोडेर अनुहारमा कम्प्याक फाउन्डेसन लगाउँछु । लिपिस्टिक ग्लस र गाजल पनि लगाउँछु । साडी त रातो चाहिहाल्यो । गहनामा सिक्री रातो र पहेँलो पोते छड्के तिलहरी कानमा झुम्का हातमा साडीलाई सुहाउने चुरा औंलामा औंठी र खुट्टामा पाउजू छुट्दैन । कपाल जुरो पारेर बाहिर रातो धागो लगाउँछु ।
धेरै गरगहना लगाएर मन्दिर जाँदा कत्तिको सावधानी अपनाइन्छ ?
सावधान हुनुपर्छ । त्यसै पनि तीजमा मन्दिर जाने धेरै दिदीबहिनीको गहना लुटिएको घटना सुन्नुपर्छ । यसबाट जोगिन नक्कली गहना लगाउनु राम्रो तरिका हो ।
दर खाने कार्यक्रम छ कि ?
म त १५ दिन भइसक्यो दर खाने निम्तो मानिरहेको । हेभी खानाले अलि मोटाएको अनुभव भइरहेको छ । तीज सकिएपछि तौल घटाउन योगा र शारिरीक व्यायाममा समय दिन्छु ।
नाचगान पनि गरिन्छ ?
आफन्तको बीचमा हल्का नाचगान गर्छु । दिनभरि चाहिँ नाच्न सम्भव नहोला ।
आफ्ना शुभेच्छुकलाई केही सन्देश छ ?
सबैलाई तीजको शुभकामना । नाचगान गरेर तीज मनाउनुहोला । स्वास्थ्यले साथ दिन्छ भनेमात्र ब्रत बस्नू भन्ने सुझाव छ । मन्दिर जाँदैमा भगवानले इच्छा पूरा गर्ने होइन । ईश्वरको बास मनमा हुन्छ मन्दिरमा होइन । निराहार ब्रत बस्नुभन्दा पानी पिउनु राम्रो ।
तस्बिर : चन्द्रशेखर कार्की
पहिरन सौजन्य : गुडविल कलेक्सन, बागबजार
Re: Arunima Lamsal - Actress and model
« Reply #1 on: March 23, 2010, 08:02:14 AM »
« Reply #2 on: March 23, 2010, 08:02:52 AM »
« Reply #3 on: April 12, 2012, 12:54:56 PM »
« Reply #4 on: April 12, 2012, 12:55:23 PM »
« Reply #5 on: September 24, 2015, 04:23:35 AM »
सुत्केरी भएको ६ महिनापछि सेक्स – अरुणिमा लम्साल
नायिकाको रूपमा स्थापित भइरहेकै बेला अरुणिमा लम्साल अमित अर्यालसँग विवाह बन्धनमा बाँधिइन्। साँढे दुई वर्ष पहिले उनीहरुले आफ्नो मायाको चिनो संसारलाई छोरी अक्षता अर्याललाई जन्म दिए। नायिकाबाट आमा सेलिब्रेटी भएपछि अरुणिमाले के–कस्तो अनुभव गरिन्? प्रस्तुत छ, आमा अनुभवबारे नेपाल समाचारपत्रका लागि संवाददाता विश्वास खड्काथोकीले अरुणिमासँग गरेको कुराकानीः
एउटी नायिकाले आमा बन्नु ठीक रहेछ कि बेठिक?
कतिलाई आमा नबन्दै ठीक जस्तो लाग्दो हो। तर आमा बन्दाको खुसीको क्षण अर्कै छ। मलाई लाग्छ यो क्षण संसारभरिकै सबैभन्दा खुसीको क्षण हो। आमा बनेकोमा मैले कहिल्यै रिग्रेट फिल गरेकी छैन।
तपाईं छोरीको आमा हुनुभयो, गर्भावस्थामा छोरा वा छोरी के जन्मियोस् भन्ने लागेको थियो?
वास्तवमा मलाई छोरी नै जन्मोस् भन्ने इच्छा थियो। सबैतिर छोरीलाई नै राम्रो भनिन्छ। अर्को कुरा म पहिलेदेखि नै मेरी आमाको साथी जस्तै भएकी छु। मलाई पनि छोरी मेरो साथी होस् भनेर छोरीको चाहना राखेकी थिएँ।
नेपाली समाजमा छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी महत्त्व दिइन्छ। तपाईंको श्रीमान् छोरी पाएकोमा असन्तुष्ट हुनुभयो कि?
छैन, छैन। श्रीमान्लाई पनि छोरीकै रहर थियो किनकि श्रीमान्को घरमा छोरीहरू नै हुनुहुन्न। त्यसैले सबैतिरबाट छोरीकै चाहना थियो। पुरै परिवारलाई नै छोरी भइदिएहुन्थ्यो भन्ने थियो।
तपार्इं आमा नबन्दा खुसी हुनुहुन्थ्यो कि आमा भएपछि बढी खुसी हुनुहुन्छ?
यो अलग–अलग फेज हो। यी दुई फेजमा अर्कै अर्कै खुसी हुन्छन्। आमा नभएको बेला केसैको टेन्सन हुँदैन, बन्धन हुँदैन थियो। त्यो फ्रिडम अर्कै प्रकारको थियो। अहिले अर्कै किसिमको खुसी छ।
आमा बन्दाको अनुभव सुनाउनुस् न?
बच्चाँजन्मिएपछि रोयो। त्यतिबेला मलाई सिरिङ्ग भएको थियो। अनि मैले सोधिहालें छोरा कि छेरी भनेर? जबकि पहिले चेकअप गराउँदा नै मेरो पेटभित्र छोरी छ भन्ने थाहा पाएको थिएँ। तर हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर हुँदैन भन्ने थियो। गर्भ चेक गराउँदा छोरी छ भन्ने थाहा पाएपछि निकै खुसी भएको थिएँ। जन्मेपछि पनि छोरी नै हो भन्ने पक्का हुँदा पनि खुसी लाग्यो।
आमा भएपछि के–के कुरामा सम्झौता गर्नुपर्दो रहेछ?
सम्झौता त धेरै कुरामा गर्नुपर्छ। सबै कुरा आफैंमाथि डिपेन्ड हुन्छ। आँखा, मन, मस्तिष्क सबै बच्चामै लगाउनुपर्दछ।
सेलेब्रिटी आमा बन्दा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो?
जहाँ जाँदा पनि जसले खै बच्चाँभनेर सोध्छन्। सबैलाई बच्चाँहेर्न रहर लाग्दो रहेछ। तर मेरो बच्चाँमसँग बाहेक अरूसँग रहन मान्दै मान्दैन।
छोरीलाई दिनमा कति समय दिनुहुन्छ?
फुल टाइम नै छोरीलाई दिन्छु। अहिले त छोरी पनि स्कुल जान थालिसकेकी छ। अहिले नर्सरीमा पुगेकी छ। नाच्छे, राष्ट्रिय गीत, गायत्री मन्त्रसमेत गाउँछे।
तपाईंकी छोरीलाई तपार्इं कलाकार हो भन्नेचाहिँ थाहा छ कि छैन?
खै त्यो त थाहा छैन होला। टिभीमा देखेपछि आमा तपार्इं किन रोएको भनेर भन्छे। म सँगसँगै अभिनय गरेको हिरोहरुलाई देख्दा मम्मी त्यो अंकल को हो भनेरचाहिँ सोध्छे।
आमा बन्दा श्रीमान्ले के–के कुरामा सहयोग गर्नुभयो?
बच्चाँरेखदेख गरेर सहयोग गर्नुभयो। मैले बच्चाँजन्माएको एक वर्षपछि नै तीनवटा फिल्म गरें। त्यतिबेला पनि श्रीमान्ले नै सहयोग गरेर मैले फिल्म खेल्न पाएकी हुँ।
छोरीले कत्तिको दुःख दिन्छिन् नि?
दुःख त दिइहाल्छ नि। आमा भन्दै रोइरहन्छे।
छोरी त खुब रुनुहुँदो रहेछ। छोरीले दुःख दिँदा तपार्इं त रुनुभएको छैन?
छोरीले दिएको दुःखले त रोएको छैन। तर ऊ बिरामी हुँदा भने रोएकी छु। छोरीलाई खोकी लाग्ने, घाँटी कराउने भइरहेको थियो। त्यतिबेला एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने रहेछ। हस्पिटलमा ४⁄५ जना सिस्टरहरुले छोरीलाई हात खुट्टा समातेर नसामा घोच्नुभएको थियो। मलाई बाहिर राखिएको थियो। छोरी आमा भन्दै रोइरहेकी थिई। बाहिर म पनि खुब रोएकी थिएँ।
फिल्ममा जम्न गाह्रो रहेछ कि सन्तान हुर्काउन?
तुलनात्मक रूपमा फिल्ममा जम्न गाह्रो छ। आफ्नो सन्तान त जसो तसो हुर्किहाल्छ। तर फिल्ममा जम्न त धेरै कुराले प्रभाव पार्छ। राम्रो गर्नुपर्दछ।
आमा बनेर बेडमा सुत्दा फिल्म खेलूँ खेलूँ जस्तो लागेन?
लाग्थ्यो, बच्चाँपेटमा हुँदा पनि फिल्ममा खेलूँ खेलूँ जस्तो लाग्थ्यो। टिभीमा आएको रिपोर्टहरु हेर्दा फिल्म कहिले गरूँ जस्तो लाग्दथ्यो।
त्यति बेला तपईंलाई फिल्मको अफर आयो कि आएन?
आएन, त्यस्तो बेलामा फिल्म गर्नु पनि त भएन नि।
आमा बनेको कारण करिअरमा हानि भयो होला है?
गर्यो नि। त्यो मेरो पिक टाइम थियो। त्यतिखेर मेरो ब्रेक भएपछि अरूले चान्स पाइहाले। तर केही पाउनका लागि केही त गुमाउनुपर्छ।
अब अर्को बच्चाँकहिले जन्माउने?
तत्काल सोच त छैन। तर दुईवटा बच्चाचाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। तत्काल भने जन्माउँदिनँ। ५⁄६ वर्षको फरक हुनुपर्दछ।
छोरीलाई के बनाउने चाहना छ?
केही सोच छैन। हुर्काउने हो, शिक्षा–दीक्षा, संस्कार दिने हो। हामीले बनाएर बन्ने होइन, अहिलेका बच्चाहरू। उनीहरूकै चाहनाअनुसार अघि बढ्छन्।
आमा बनेर बेडमा सुत्दा सेक्सको चाहनाचाहिँ जाग्दो रहेछ कि रहेनछ त?
त्यस्तो त महसुस भएन, त्यो बेला सन्तानमै ध्यान जाँदो रहेछ। सेक्समा होइन।
आमा बनेको कति समयपछि सेक्स सम्बन्ध राख्नुभयो?
त्यस्तै छ महिनापछि।
आफू आमा बनिसक्नुभयो, तपार्इंको विचारमा आमा भनेको के रहेछ?
आमा भनेको जननी नै हो। आमाले जन्म दिएर संसार देखाउँछिन्। त्यसपछि आँखा खुलाउने काम भगवान्ले गर्छन्।
« Reply #6 on: October 15, 2017, 11:30:46 AM »
अरुणिमाको पनि डिभोर्स भएछ